Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ: Anyị alọghachila!
All Sandals Resorts na-emepe ọzọ, n'eziokwu, ọtụtụ emeghelarị ndị ọzọ n'ihi imeghe n'oge na-adịghị anya. Oge ziri ezi maka ọtụtụ ebumnuche iji mee atụmatụ njem maka Sandals ezumike taa. Ọ dịghị mkpa ichere maka akụkọ ụwa na nhọrọ niile dị.
Nke mbu, akpụkpọ ụkwụ na-ewerekarị ahụike na nchekwa dị oke mkpa na ebe ezumike ya. Ugbu a karịa mgbe ọ bụla, akpụkpọ ụkwụ na-eme ihe ndị ọzọ iji chebe ọnụnọ ndị ọbịa yana Protocols Sandal Platinum nke ịdị ọcha. Oghere ntụrụndụ mepere emepe emeela ka usoro iwu ha dịkwuo iche iji gbakwunye ebe niile ị ga-esi na-aga ebe ọ bụla site na mgbe onye ọbịa rutere n'ụlọ ezumike ọdụ ụgbọ elu, site na ahụmịhe ezumike niile. Usoro iwu ndị a na ụkpụrụ ịdị ọcha na-ekwe nkwa ijikwa ahụike na nchekwa maka ndị ọbịa na-achọ udo nke uche na Caribbean.
Barbados: Ugbu a Mepee
Jamaica: Ugbu a Mepee
Saint Lucia: Meghee
Grenada: Mepee October 1
Bahamas: Mepee November 1
Mana chere, enwere ihe!
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ chọrọ ka ndị ọbịa ya nweta ezumike na-enweghị nchekasị. Ọ bụ ya mere Sand Resorts ji egosipụta omume na atumatu kachasị mma iji dozie uche gị. Ma ọ bụ ntinye akwụkwọ dị ugbu a ma ọ bụ nke emere ugbu a, akpụkpọ ụkwụ emeela ka ndị ọbịa kpuchie ya.
Kagbuo ime ụlọ efu na nkwụghachi 100%
A kagbuola ụlọ ime ụlọ maka nwepu oge kagburu ụbọchị iri atọ na otu ma ọ bụ karịa tupu ụbọchị abanye (ma e wezụga Oke mmiri-Oke Mmiri). Nke a metụtara naanị akụkụ ala / ụlọ nke ntinye akwụkwọ. A kagbuola ndị na-efe ụgbọelu na ntaramahụhụ na mmachi ndị na-ebu ụgbọelu.
Onyinye Ahịa Kasị Mma
Akpụkpọ ọnụ ahịa akpụkpọ ụkwụ kachasị mma na-enye ndị ọbịa ohere iche na ọnụego ụlọ natara bụ ọnụahịa kacha mma. Ọbịa nwere ike akwụkwọ na obi ike online, site a ọkacha mmasị njem gị n'ụlọnga, ma ọ bụ site na-akpọ 1-888-SANDALS. Ọ bụrụ n'ime oge 24 ịdebanye ezumike na ntanetị na www.sandal.com ọnụahịa dị ala maka otu ụbọchị mbata, ọnụ ọgụgụ nke abalị, na ụlọ ụlọ achọtara, Akpụkpọ ụkwụ ga-akwụghachi ihe dị iche.
Ihazi ndetu ga-enwe nhọrọ "jide ụlọ" maka ihe ruru $ 49 kwa onye iji nyere aka na njem njem. Họrọ nhọrọ “njide” pụtara kaadị akwụmụgwọ ejiri maka nkwụnye ego ga-akwụ ụgwọ $ 302 ọzọ na-akpaghị aka na ụbọchị 21. Mkpokọta fọdụrụ itule nke ezumike ga-akpaghị aka ga-ebubo 45 ụbọchị tupu ego na-na ụbọchị.
Ndị ọbịa nwere ike igbachi na ezumike ha ọzọ site na iji akpụkpọ ụkwụ na-agbanwe agbanwe ma na-enweghị ọnụ yana enweghị usoro ịkwụ ụgwọ ọmụrụ nwa. Ọnụ ego nke ezumike okomoko gụnyere ezumike akpụkpọ ụkwụ nwere ike ịgbasa ruo ọtụtụ ọnwa mgbe ị na-ede akwụkwọ ozugbo na akpụkpọ ụkwụ, yana ndị ọbịa nwere nhọrọ ịkwụ ụgwọ nkeji 3 ruo 24.
Ebe ọ bụ na ntụrụndụ Sandals dị na mpaghara Caribbean dị iche iche, ụfọdụ n'ime ha azaghachila ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ (COVID-19) site na ịkpọsa mmachi mpaghara na ndị ọbịa ma ọ bụ ebe ntụrụndụ, enwere ike inwe mmetụta ụfọdụ na Mmemme San Diego Resort Exchange. Usoro mmemme mgbanwe a dabere na, ma dabere na, mmachi gọọmentị niile metụtara, gụnyere ndị na-egbochi ikike ndị ọbịa ịga n'etiti ihe onwunwe ma ọ bụ metụta ebe ntụrụndụ Sandals 'iji nyefee ndị ọbịa n'enweghị nsogbu ma ọ bụ mepee ma rụọ ọrụ. Usoro ihe omume a ga-abụ ihe efu ebe amachibidoro ya ma ọ bụ na ikpe akpụkpọ ụkwụ sụgharịrị enweghị isi n'ihi mmachi mpaghara ma ọ bụ ọrịa na-efe efe. Dị ka mgbe niile, ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa akpụkpọ ụkwụ ga-ebute ụzọ.